दर्ता नै नभएको कोरोनिल किट तत्काल प्रयोग नहुने Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
काठमाडौँ : नेपालमा दर्ता नै नभएको ‘कोरोनिल किट’ तत्काल प्रयोग नगरिने भएको छ। कोरोनाको उपचारका लागि भन्दै निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी मार्फत प्राप्त भएको किट प्रयोग नगरिने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले जानकारी दिएको हो।
भारतीय योग गुरु रामदेवले बनाएको सो किट न त नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको छ न कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचारका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अनुमति नै दिएको छ।
विभागका सूचना अधिकारी डा. मुनकर्ण थापाले तत्काललाई ‘कोरोनिल किट’ वितरण नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले भने,‘तत्काल पठाउँदैनौ। स्थगित हो।’
आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थामार्फत चिकित्सकको निगरानीमा औषधि वितरण गर्ने की भन्ने सोच भए पनि तत्काल वितरण नगरिने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी डा. थापाले जानकारी दिए।
औषधि आयातका लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट आयात अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर, कोरोनिल किट दर्ता प्रक्रियामै रहेको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिए।
दर्ताका लागि केही कागजात भने पेस भएको उनले जानकारी दिए। ‘उहाँहरूले दर्ता गर्न केही पेस गर्नु भएको छ। हस्तान्तरण उता भएछ,’ विभागका सूचना अधिकारी केसीले भने,‘प्रयोग हुनुभन्दा अघि त हामीकहाँ दर्ता अनुमति भएर मात्रै प्रयोग हुन्छ।’
अनुदानमा प्राप्त भएको भनिएको सो किट करिब ५० बाकस भएको आयुर्वेद विभागका सूचना अधिकारी डा. थापाले जानकारी दिए।
मन्त्रिले लिएर सिधै विभाग
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भइसकेपछि विभागलाई बोलाएर सो औषधि दिइए पनि त्यसअघि आयुर्वेद विभागमा जानकारी नभएको डा. थापाले जानकारी दिए।
‘यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयो। आउने बेलामा के–के कुरा भयो। कस्तो भो। वार्ता के भयो। त्यो प्रारम्भिक चरणमा हामी थिएनौँ,’ आयुर्वेद विभागका सूचना अधिकारी डा. थापाले भने,‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भइसकेपछि विभागलाई बोलाएर त्यो औषधि दिइएको छ।’
दर्ता नै नभएको औषधि किन मन्त्रीमार्फत हस्तान्तरण भयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। भारतमा रामदेवको पतञ्जलिले बनाएको सो औषधि नेपालमा ‘पतञ्जलि योग समिति’ ले भित्र्याएको हो। स्रोतका अनुसार शालिग्राम सिंह नाम गरेका व्यक्तिले सो किट मन्त्रिलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी केसीले पनि पतञ्जलिको नेपाल स्थित ‘पतञ्जलि नेपाल’ले यो औषधि आयात गरेको बताए। उनले भने भने,‘पतञ्जलि नेपाल स्थित संस्था पतञ्जलि नेपालले गरेको भन्ने छ।’
यो भारतमा समेत विवादित औषधि हो। कोरोना निको हुन्छ भन्ने प्रमाणित नै नभई औषधि लिँदा निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीको चिकित्सकहरूले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना समेत गरेका छन्।
के हो औषधि?
मन्त्रालयबाट औषधि प्राप्त भइसकेपछि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा यो औषधिको बारेमा छलफल भएको डा. थापाले जानकारी दिए। त्यो औषधिमा के–के द्रव्य छन् भनेर हेर्दा आयुर्वेदिक औषधि नै भएको उनले बताए।
बक्सामा कोरोनिल किट, नाकमा हाल्ने तेल र स्वासरी भन्ने ३ किसिमका औषधि भएको उनले जानकारी दिए। डा. थापाले भने,‘यसमा ३ वटा औषधि छ। एउटा नाकमा हाल्ने तेल औषधि छ, अनु तेल भनेको त्यो आयुर्वेदको औषधि नै हो। कोरोनिल भन्ने किट छ, ट्याब्लेटमा। स्वासरी भन्ने फोक्सो सम्बन्धी, दाम सम्बन्धी, खोकीलाई काम गर्ने औषधि हो।’
तेल नाकमा हाल्ने र अन्य दुईवटा खाने औषधि भएको उनले जानकारी दिए। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको र रुघालगायतको समस्यामा केही काम भने गर्ने उनले बताए। यसले मानवीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपर्ने र खराब औषधि पनि नदेखिएको आयुर्वेद विभागले जानकारी दिएको छ।
विभागका डा. थापाले औषधिमा दोष भने नभएको जानकारी दिए। उनले भने भने,‘औषधिमा कुनै दोष छैन। औषधि जेन्युन हो। मान्छे बिरामी हुँदा खाइरहने औषधि हो।’
तर, कोरोना निको पार्ने नभई कोरोनाको लक्षणलाई भने केही सहज बनाउने विभागका सूचना अधिकारी डा. थापाले जानकारी दिए। उनले भने,‘नाम जे–जे भए पनि कोरोनालाई कम गर्ने, कोरोना निको पार्ने, कोरोनालाई बचाउने भन्ने औषधि हैन। लक्षण अनुसार उपचार गर्ने औषधि चाहिँ छन्, त्यसमा।’
चिकित्सकको निगरानीमा आयुर्वेद विभागले आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थामार्फत सो औषधि वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, त्यसरी वितरण गर्दा बजारमा छ्यापछ्याप्ती रूपमा औषधिको प्रयोग हुन सक्ने र बिरामी ठगिने जोखिम भएकोतर्फ पनि सोचविचार गरेको विभागले जनाएको छ।
विभागका सूचना अधिकारी डा.थापाले भने,‘हामीले वितरण गर्दा त समस्या पर्दैनथ्यो। किनकि चिकित्सकको निगरानीमा हुन्थ्यो। तर, त्यही चिज मास पब्लिकमा गयो भने के होला भनेर बाँड्ने काम स्थगित गरेका छौँ।’
यो औषधि मानव स्वास्थ्यमा हानी नगर्ने भए ट्रायलको रूपमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि आइसोलेसन सेन्टरतिर चिकित्सकको निगरानीमा भने प्रयोग गर्न सकिने सूचना अधिकारी डा. थापाले जानकारी दिए। तर, यसका लागि पनि तत्काल प्रयोग नगर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्न ब्रिटिस कलेजले सहयोग गर्ने जनाएको छ। ब्रिटिस कलेजका निर्देशक महेन्द्र राज कँडेलले कोभिड १९....